I-samsung galaxy s7 kunye ne-s7 edge: 10 yeyona midlalo ilungileyo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge: 10 yeyona midlalo ilungileyo
Ke, unayo & apos; unale Samsung Galaxy S7 intsha okanye umntakwabo omkhulu, iS7 Edge. Uyaziqhobosha, usete iminwe, wonwabele ikhamera kunye neziboniso ezintle ... kodwa yintoni elandelayo? Ufuna imidlalo ethile, ewe!
Ngekhathalogu enkulu yoGcino lweGoogle oluvulekileyo, unokukhetha okuninzi, kodwa ngokuqinisekileyo awunalo ixesha lokujonga yonke imidlalo phaya.
Ukukunceda ukuba uqalise amava akho eGPS S7 kwisiqalo esihle, sibeke uluhlu kunye ne-10 yeyona midlalo ilungileyo eya kukugcina wonwabile ekuhambeni. Ukusuka kwiiphazili ukuya kwimidlalo yokubaleka ngepinki yabadubuli bomntu wokuqala kunye nemidlalo eqhelekileyo, sinento eyahlukileyo kwiindlela ezahlukeneyo zokudlala. Ngaphandle kokuphinda uqhubeke, nantsi ukhetho lwethu lweyona midlalo mihle ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge.
I-Asphalt 8: Ukuhamba ngomoya
Ixabiso: Simahla, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo Khuphela I-Android
Nantsi ke indlela esichaze ngayo i-Asphalt 8: Ukuhamba komoya kuhlolo lwethu lwantlandlolo: Nje ukuba uyiqalise, uya kuziva kwangoko ukuba ukwi-movie yesenzo. I-adrenaline ikhaba kwasekuqaleni kwaye ukhawuleze uqonde ukuba lo mdlalo uphathelene nesantya kunye nokuba ndlongondlongo, ukukhawuleza kunye nomsindo, kwaye sithetha ukuba zombini. Konke malunga nesenzo kwasekuqaleni: ukukhukhuma, ukutsiba kumaqonga, ukubetha ezinye iimoto, uya kuzilibala ngokukhawuleza iingcinga zakho zokuqhuba ngokukhuselekileyo- konke kukufumanela i-nitro exabiseke ngakumbi, ukutyhalela emgangathweni kwakhona kwaye emva lonke olunye ukhukhuliseko.
Simi kuloo mazwi. Phantse iminyaka emibini emva kokukhutshwa kwayo kwasekuqaleni, umdlalo uye wafumana uhlaziyo oluninzi kunye nokuphuculwa, kwaye ngoku kumnandi ngakumbi ukudlala.
I-Monument Valley: indie puzzler yenziwe kakuhle
Ixabiso: $ 3 Khuphela kwi I-Android
I-Monument Valley, iphazili ejikajika ingqondo malunga nelizwe elahlekileyo, elingenakwenzeka, elixela ibali lika-Ida, inkosazana kwilizwe elingaqhelekanga, eliguqukayo kwihlabathi elingenakwenzeka ukwakhiwa kwe-3D-esque, kujongeka njengokuphuma kwengqondo ye-MC Escher. Imhlophe kwaye inyulu, u-Ida uhamba ejikeleza eli bhlokhi, ipiksile-egqibeleleyo kwihlabathi ojikelezayo kwaye uliguqulele ukufikelela kwisibingelelo okanye kumnyango okukukhokelela ukusuka kwindawo entle ukuya kwenye. Libali ngokungathi liyindida, nangona kunjalo, kwaye yile nto yenza ukuba iMonument Valley ibe ngamava okuphefumla onokuthi uqale kwaye uphele ngexesha elinye.
Imekobume yonke ye-Monument Valley ibonakala ngathi iphefumlelwe lihlabathi eliyinkangala le-arabs yakudala apho kwakukhula kakuhle imathematics nenzululwazi. Njengoko ugqibezela inqanaba ngalinye, ufumana ifom yejiyometri entsha, ukubuyisa ubuqhekeza bobulumko. Ngapha koko, nganye yeephazili yahlukile ngokukodwa ukuba ubuya kudlala ngokubona nje ukuba itshintsha njani indlela nganye nganye.
Iminecraft: Indlela yeNdaba
Ixabiso: $ 6 Khuphela kwi I-Android
Kolu luhlu luneziqendu ezintlanu zeepisodic, uzakuqala ukhenketho oluyingozi kwi-Overworld, ngokusebenzisa iNether, ukuya esiphelweni, nangaphaya. Wena nabahlobo bakho nihlonipha uMyalelo oMangalisayo welitye: Igorha, iinjineli zaseRedstone, uGriefer, kunye noMyili wezakhiwo; ababulali be-Ender Dragon. Ngelixa use-EnderCon ngethemba lokudibana noGabriel uMlo, wena nabahlobo bakho nifumanise ukuba kukho into engalunganga… into eyoyikisayo. Ukoyikwa kukhutshwa, kwaye kuya kufuneka usete kwimfuno yokufumana uMyalelo weLitye ukuba uza kuligcina ilizwe lakho elibeleni.
Indlela yeNdaba yeMinecraft
Ukulwa kwale mihla 5: oyena mntu uphezulu
Ufakelo lwesihlanu kuthotho lokudubula lomntu wokuqala luza nemizobo engcono nangaphezulu kunangaphambili, imo yomdlali osisityebi, oqhutywa libali, kunye nokhetho lomdlalo wabadlali abaninzi apho iqela labadlali lijongana emfazweni. Ukulwa kwalemihla 5 kwazisa iindidi ezine zamagorha oza kukhetha kuwo: Uhlaselo, Heavy, Recon, okanye Sniper. Ukukhetha iklasi kuchaza indlela oza kudlala ngayo, kwaye kokukhona uya phambili kumdlalo, kokukhona uya ukhulisa izakhono zakho zeklasi.
Imowudi yomdlali omnye iphucule kakhulu ukusukela ukuLwa kwe-4 yanamhlanje, ikusa kwiindawo ezahlukileyo, ukusuka eVenice ukuya eTokyo, kodwa ikwayilo loyilo kumdlalo-ukusuka kwimishini apho ukhusela umntu, ukuya kwimiboniso bhanyabhanya apho iqhawe lakho liphambana stunts ukusinda, emva koko udubule ihelikopta, nokunye okuninzi.
Ukulwa kwangoku 5
Vainglory: MOBA yenziwe kakuhle
I-Vainglory iphuhliswe ngokukodwa kulawulo olusekwe ekuchukumiseni kwaye luyinyani yokwenyani kubadlali be-MOBA abanqwenela abadlala ngokuhamba. Kukudlala-ngokukhululekileyo kwaye umphuhlisi ubanga ukuba abadlali baya kuba nakho ukuvula umxholo ngokudlala umdlalo ngokwesiqhelo, kodwa baya kuba nokhetho lokuhlawula ukuba banqwenela ukuvula izinto ngokukhawuleza. Umdlalo wenzelwe umdlalo okhawulezileyo, okwemizuzu engama-20-umhlaba olungileyo ophakathi phakathi kwemijikelezo emifutshane, eneselfowuni kunye ne-sota ye-Dota.
Indlela enqamlezileyo: thepha. itephu. itephu.
Lumkiswa: lo mdlalo ungakhokelela ekubeni likhoboka. Indlela enqamlezileyo iluhlobo olufana nembaleki engapheliyo, kodwa ngokujija kuyo. Utsiba ukusuka eqongeni ukuya eqongeni, ukusuka kwindlela ukuya kwi-lane, ukunqanda iingozi zazo zonke iintlobo. Nangona u & apos; uvunyelwe ukuba ume kunye nexesha lokutsiba kwakho okulandelayo, ukuma ngxi ixesha elide kuya kukhokelela ekufeni ngequbuliso okuvela phezulu. Dlala umdlalo kwaye uza kubona into esithetha ngayo.
Clash Royale: Umdlalo omtsha weSupercell & apos; kukuqhuma
Qokelela kwaye uphucule inqwaba yamakhadi abonisa ukungqubana kwemikhosi yamaqela, imilo kunye nokuzikhusela owaziyo nothando, kunye neeRoyales: iiNkosana, iiKnights, iiDragons zabantwana kunye nokunye. Ukunkqonkqoza uKumkani wotshaba kunye neeNkosazana ezivela kwiinqaba zazo ukoyisa abachasi bakho kwaye uphumelele iiTrophies, iithsaba kunye nozuko eArena Yenza i-Clan ukuze wabelane ngamakhadi kwaye wakhe elakho idabi ekuhlaleni.
Iklabhu yePunch: ukubetha kwe-indie
Iklabhu yePunch ngumdlalo wolawulo lomdlalo wamanqindi onemigca emininzi yamabali. Injongo yakho icacile, kodwa indlela ofika ngayo ixhomekeke ekubeni ufuna ukunyuka ngokusemthethweni irenki, okanye uthathe indlela engenangqondo ngakumbi. Uhamba ngeenkampu zoqeqesho ezahlukeneyo, ukuphucula izakhono ezahlukeneyo ukoyisa iintshaba zakho kwaye inkqubo ithatha ixesha kunye nomzamo, kodwa ikhokelela kumdlalo wokudlala omlutha kakhulu.
ULara Croft Go: wokugqibela odidayo
Ixabiso: $ 2 Khuphela kwi I-Android
I-Lara Croft GO ngumdlalo owenziwe ngabenzi bakaHitman GO, kwaye yiapos umdlalo weqonga we-puzzle obonisa wonke umntu kunye ne-apos; Umdlalo ugcwele uninzi lweenkcukacha ezimibalabala kunye nokuhamba ngokutyibilikayo, okuthe tye. Ukongeza, iqela le-dev lifumene inkuthazo enkulu kwezihloko zakudala zeTomb Raider ezivela kwii-90s, ezibonakala ngendlela amanqanaba aphuhla ngayo, iintshaba adibana nazo uLara, oopopayi abalinganiswa basisiseko kunye, ewe, nesinxibo sakhe.
Lara Croft Yiya
I-Candy Crush Saga: ububi obuyimfuneko
Ewe, lo mdlalo siwubiza ngokuba bububi obuyimfuneko kuba rhoqo emva kwethuba ufumana ukulunywa. Ngokuqinisekileyo, ayilunganga, kodwa ewe, ayisiyiyo into onokumelana nayo. Ipuzzle emnandi, enemibala yindlela entle yokuchitha imizuzu embalwa udlala ngelixa uloliwe okanye ixesha lokubulala.
Isaga yokuguba ikhendi
ubhala njani kwifayile kwiJava
I-samsung j3 vs j7 2017
IMotorola DROID Turbo 2 vs Samsung Galaxy S6
Galaxy S10 & apos; s PowerShare umva kuvavanyo lokuvavanywa kwesantya ngeSamsung Buds kunye nokuBukela okuSebenzayo
I-Samsung Galaxy Note 20 vs Qaphela 20 Ultra: uyintoni umahluko?
IVerizon itsala iplagi kwiVoicemail ebonakalayo yezixhobo ezithile eziqala nge-8 kaJulayi (NGAPHAMBILI)
Eyona fowuni iVerizon isebenza ngoku